true drugs /zu-ZA/tools-for-life/drugs/steps/why-people-take-drugs.html read 3 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/drugs_zu_ZA.jpg Izimpendulo Kwizidakamizwa
Ngemuva kokuba othile evumile ukuthi uyayeka izidakamizwa, isinyathelo sokuqala ukumsiza ukuba awome.
Ukomiswa kusho ukudlula kwisikhathi sokuhoxa ekusebenziseni izidakamizwa.
Kusungulwe izixazululo ezisebenzayo kwi-Scientology ezenza ukuthi umuntu akwazi ukoma ngempumelelo.
Ngaphambi kokuthi lezi zixazululo zibe khona, ukuphuma kwizidakamizwa kwakubuhlungu kakhulu.
Umsebenzisi, ongasazithathi izidakamizwa udlule kwizimpawu zokuhoxa. Lokhu ukusabela okungokomzimba nangokwengqondo umuntu abhekana nakho lapho eyeka ukuthatha izidakamizwa. Ziyesabeka. Akekho umuntu ohlukumezayo owake wasungula noma yini embi kakhulu.
Umuntu wabe esenokhetho olubili:
Ukuhlala ezidakamizweni futhi ubanjwe futhi uhlupheke ungabi nethemba lokuthile okungcono.
Ugule kakhulu ngenkathi uphuma kwizidakamizwa kangangokuba kwakubuhlungu kakhulu ukubekezelela.
Ngakho ke umuntu osebenzisa izidakamizwa wabhekana nekusasa elingajabulisi kakhulu.
Ngenhlanhla, izindlela ezimbili ezisebenzisekayo manje zikhona ezenza umuntu akwazi ukuyeka izidakamizwa ngenani elincane kakhulu lokungakhululeki. Zombili lezi kufanele zisetshenziswe:
Umuntu owomayo kumele anikezwe umsoco owanele. Ngomsoco kushiwo ukudla okufanele umzimba okudingayo ukuze uhlale uphilile. Lokhu kufaka ama-vitamins kanye nama-minerals. Umuntu osebenzisa izidakamizwa unokushoda kwama-vitamins kanye nama-minerals. Ngokusilela kusho ukuthi okunganele entweni ebalulekile empilweni. Isibonelo, izidakamizwa zidala ukusilela ku-vitamin C, i-vitamin B1, B complex ne-niacin. Wonke lama-vitamin abalulekile empilweni.
Ukunika umuntu ama-vitamins nama-minerals ngenkathi ewomile kuye kwatholakala ukuthi kubaluleke kakhulu kwi-withdrawal eyimpumelelo. Esikhundleni sokumenza ukuthi ayeke ukuthatha izidakamizwa, kanye nobuhlungu nengozi yokwehluleka, unikezwa ama-vitamins nama-minerals amaningi.
Kufanele anikezwe ama-Objective Processes, okuyindlela esiza umuntu ukuba abuke noma abeke ukunaka kwakhe ngaphandle kuye. I-Objective ihlobene nezinto zangaphandle, hhayi imicabango noma imizwa yomuntu. I-process uchungechunge ngqo lwenkomba noma ukulandelana kwezenzo (ukulandelana kwe-oda ngendlela izinto ezenzeka ngayo) ukuletha umphumela owufunayo.
Ama-Objective Processes asiza umuntu owayesebenzisa izidakamizwa ukuqondisa ukunaka kwakhe kuye nakwindawo emzungezile nakubantu nezinto ezikuyo. Lesi senzo sibaluleke kakhulu kumuntu oyeka izidakamizwa ngoba sisiza ukumngenisa esikhathini samanje.
Uma esetshenziswa kahle, ama-Objective Processes adambisa izimpawu zokuhoxa kumuntu, kanye nama-vitamins nama-minerals, kwenza ukuhoxiswa ngempumelelo kube ngukuncipha okuncane.
Uma wazi umuntu othembele ezidakamizweni, ungamsiza akhishwe ekuhoxisweni ngempumelelo ngokusebenzisa lezi zindlela.
Uma umuntu ehlushwa umlutha omubi kakhulu, kungcono ukumthumela kudokotela omuhle ukuze ayohlolwa. Udokotela angancoma izindlela zokuqapha ezikhethekile ezidinga ukuthathelwa lowo muntu.
Abanye abantu kungenzeka ukuthi bafakwe kwisidakamizwa sokwelashwa befakwa ngudokotela futhi kungenzeka bahlale kuso. Kusemuntwini nakudokotela ukunquma ukuthi yini okufanele yenziwe kulezo zimo.